मिस्टर एण्ड मिस थारुको चैत १३ मा ग्राण्ड फिनाले, कति छन् सहभागी ? - sailungonline
२ चैत्र २०७७, सोमबार २१:३२ । काठमाडाैं
तेस्रो संस्करणको मिस्टर एण्ड मिस थारु २०२१ का लागि भोटिङ खुल्ला गरिएको छ । प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनाले नजिकिएसँगै भोटिङ पनि खुल्ला गरिएको हो ।
वाइएसी इभेन्ट्सको सहकार्यमा जह इन्टरटेनमेन्टद्वारा आयोजित यस प्रतियोगितामा मिस्टर थारुतर्फ १५ जना र मिस थारुतर्फ १७ जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरूलाई अहिले काठमाडौँमा प्रशिक्षण गराइरहेको जह इन्टरटेनमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक सुरेश चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रशिक्षण चलिरहँदा भोटिङ लाइन पनि खुल्ला गरिएको प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार खल्ती एपबाट आफूलाई मनपर्ने प्रतिस्पर्धीहरूलाई भोट गर्न सकिन्छ । यस भोटबाट प्रतिस्पर्धीहरूलाई टप ८ सम्म पुर्रयाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । सर्वाधिक भोट ल्याउने प्रतिस्पर्धीले ‘खल्ती पब्लिक च्वाईस अवार्ड’ प्राप्त गर्ने प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रतिस्पर्धीहरूको फागुन १४ गतेदेखि काठमाडौँमा प्रशिक्षण चलिरहेको छ । महिला तथा पुरुष दुवैतर्फका प्रतिस्पर्धीहरूलाई मिस इन्टरनेशनल २०१८ रोनाली अमात्यले योगा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएकी छन् भने मिस इन्टरनेशनल वर्षा लेखीले वातावरण र मिस नेपालको यात्रा बारे अनुभव साटेकी थिइन् । यस्तै स्वस्तिका राजभण्डारीले मेकअप, प्रिया रानी लामाले कोरियोग्राफी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएकी छन् । सञ्जय काफ्लेले आधुनिक कृषिको बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए । मिस्टर एण्ड मिस थारुकी मेन्टर निश्मा चौधरीले पुरै प्रशिक्षण समय अवधिभर विभिन्न विधामा प्रशिक्षण दिइरहेकी छन् ।
प्रशिक्षण अवधिमै यही चैत ७ गते ट्यालेन्ट राउन्ड समेत आयोजना गरिने इभेन्ट डाइरेक्टर रुपेश चौधरीले जानकारी दिए ।
ग्राण्ड फिनाल ?
प्रतियोगिताको फाइनल चितवनको खैरहनीस्थित डिज्नी पार्क रिसोर्टमा चैत १३ गते हुनेछ । प्रतियोगिताको फाइनललाई भव्य बनाउने गरी तयारी भइरहेको वाइएसी इभेन्टका इभेन्ट म्यानेजर जयस चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको विजेताले नगद ५० हजार, फस्ट रनरअपले ३० हजार, सेकेन्ड रनरअपले २० हजार र विभिन्न उपहारहरू प्राप्त गर्ने इभेन्ट म्यानेजर सुदिप चौधरीले जानकारी दिए ।
कहिलेदेखि सुरूवात ?
थारु समुदायको उत्थान र कलासंस्कृतिको संरक्षणका लागि थारु युवाहरू सन् २०१७ देखि यस प्रतियोगिताको सुरुवात गरेका हुन् । यस प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको मिस्टर थारु चन्दन चौधरी र मिस थारु जेनिसा चौधरी भएकी थिइन् भने दोस्रो संस्करणको मिस्टर थारु रविन चौधरी र मिस थारु आकृति चौधरी भएकी थिइन् ।